Very tokoa ve ilay Maha-malagasy antsika ve? Dia tsy maintsy nodorana sy nosimbaina avokoa ve? | Blaogin'i leboda |
[ Ankapobeny ] 26 Janoary, 2009 16:04:: Voavaky in- (2832)
Aty lavitra aty izahay no mahazo vaovao mitsitapitapy ary tena tompotrano mihono satria tsy mandeha ny RNM sy ny TVM dia mifindra MBS indray dia tsy misy koa, dia mifindra Radio Lafa mampita RDB dia hirahira ny ao. Soa ihany fa nisy ny finday ka akory ny hatairana fa efa mandoro ny fananam-bahoaka (eny tompoko, na iza na iza hitondra eo dia fananana iombonana io!) dia ny RNM sy ny TVM. Dia niroso ny fahavoazana ka may daholo ny fananan'i Ravalomanana (MBS, Magro,..). Saingy nahafatesan'olona izany, tena mampalahelo,...miondrika am-panajana amin'ireo namoy ny ainy ny tenanay.
Tsaroako eto anefa ny fandrombana ireo karana natao tao Toliara sy Antsirabe tamin'ny fotoan'androny satria misy fiantohana ireny fananana ireny ka dia voasolo indray ary ny tena loza dia mahazo vola amin'ny ara-dalana ny tompon'ny fananana simba tompoko. Avelako eo iny.
Fa ny tiako isintomana antsika vetivety hoy lay fandrotrarana an-tanana haolo izay, tsy hamingana akory fa hitazona anao mba hidinika e!
Iza moa no nametraka an'i Ravalomanana ho Filoha teo? Indrindra fa ity fihodinana faharoa ity?
Raha ohatra ka hametraka olona vaovao indray isika zany zao fa fanirian'ny maro izany dia ahoana indray ny fitsipika ifampifehezana izany? Omena 4 taona aloha hiasany dia averina laniana indray dia aongana teo indray rehefa tsy mamely? Sa tena handray fepetra marina isika ka hisy teny ifanomezana marina ka raha vao dila ny lera nifanarahana dia aongana indray? Izay marina ve ny tiantsika hatao?
Moa ve ilay hasolo eo efa vonona any sa rehefa tonga eo isika vao hifandinika indray ka hametraka izay ho eo?
Tena olona afaka hihafy tokoa ve? Hiaraka hidinika ka hifanraka fa samy hihafy marina? Afaka hizaha ifotony marina ve? Sa mbola avela ireo mpiasam-panjakana tsy miasa marobe nefa mandray karama isam-bolana mandavataona? Marobe ireo olona ireo no mitsentsitra ny firenena toy izany.
Afaka hiady marina amin'ireo kolikoly misy eto marina ve? Satria ireo no mampahantra ity firenena ity ka handoa ny trosa tsy toko tsy forohina fotsiny fa tsy nisy zavatra tena nijoro ka nitondra fiovana fotsiny.
Firy moa ireo fotodrafitrasa eny ambanivohitra no miteraka olana amin'izao fotoana izao? Satria nisy kolikoly be tao. Lasa niteraka fisarahana eo an-tanana ilay fotodrafitrasa nantenaina hitondra fandrosoana.
Raha tena ankinina amin'ireo fokonolona eny ambanivohitra marina ny fitandroana ny fandriampahalemana eny dia milamina fa idiran'izao manam-pahefana sy mpanararaotra izao dia mikorontana. Tsy misy mpanao ratsy tafiditra ao an-tanana raha tsy misy olona avy ao mampandroso azy ireo.
Very ilay maha-malagasy : mandady rariny, miara-midinika, mandala ny fihavanana, mitandro ny aina, .....
Tsy misy mihaino raha tsy mikiakiaka, manimba zavatra, misy aina afoy, manimba fananana, ....
Mivavaha mafy isika fa ambavahaon'ny zavadoza tsy hita fiafarana isika izao.
(3) Hametraka hevitra (0) Verindrohy (trackback) Rohy maharitra
Hevitra 3 "Very tokoa ve ilay Maha-malagasy antsika ve? Dia tsy maintsy nodorana sy nosimbaina avokoa ve?"